I-China Umgangatho olungileyo we-KM NU Series yeCylindrical Roller Ukunikela i-NU240ECM yoMvelisi kunye noMthengisi | Kunmei
Umgangatho olungileyo we-KM NU Series yeCylindrical Roller Ukunikela nge-NU240ECM
Ukuchaneka okuphezulu, ixabiso eliphantsi, umgangatho olungileyo.
I-KM ye-roller cylindrical bearing, i-100% yentsimbi ye-chrome, amakhonkco kufuneka anyange ubushushu, ukuze ikona libe nekona elimnyama. Ikhetshi ethwele ziikheyiji zobhedu kunye nekheji yentsimbi Umgangatho wokuthwala ngu-P6, P5. Ukukhangela phambili kwintsebenziswano nawe.
Iibheringi ze-Cylindrical roller zihlukanisiwe, kulula ukuzinyusa kunye nokudiliza, zibalasele ngakumbi ngakumbi xa zisetyenziswa kwiibheringi ezifuna ukuphazamiseka phakathi kwamakhonkco angaphakathi nangaphandle kunye neshafti kunye nendlu. Isilinda esinevili esine-cylindrical sinxibelelana nomgca wokuhlaziya phakathi kweeroli kunye nomgaqo wendlela, ophelisa uxinzelelo. Xa kuthelekiswa neebheringi zebhola ezinobungakanani obufanayo bomda, iibheringi ze-cylindrical roller zinokuthwala umthwalo omkhulu. Kubume, olu hlobo lokuthwala lulungele ukujikeleza ngesantya esiphezulu.
Iibheringi ze-Cylindrical roller nazo ziyafumaneka kuyilo olutywiniweyo okanye olwahluliweyo. Kwiibheringi ezitywiniweyo, izileli zikhuselekile kwizingcolisi, amanzi kunye nothuli, ngelixa zibonelela ukugcinwa kweoyile kunye nokukhutshwa okungcolileyo. Oku kunika ukukhuhlana okuncinci kunye nobomi benkonzo ende. Ukwahlula iibheringi zijolise ikakhulu kumalungiselelo okuphatha ekunzima ukufikelela kuwo, afana ne-crank shafts, apho enza lula ukugcinwa kunye nokufakwa endaweni yawo.
Xa ubukhulu bangaphandle bungaphantsi (kubandakanywa) i-400mm, ikheyiji yobhedu eqinileyo okanye ikheji yesinyithi yamkelwa kumqolo omnye we-roller cylindrical roller. Xa ubukhulu bangaphandle bungaphezulu kwe-400mm, ikheyiji yobhedu kunye nepini yohlobo lwepiki yamkelwa kwimigca emine ye-cylindrical roller.
Igama lemveliso cylindrical mqengqeleki ukuzala
Ulwakhiwo roller irola
Chwetheza NU NNU NF njalo njalo
Izinto eziphathekayo Intsimbi yeChrome,
Ukuchaneka P5 P6
Iimbonakalo Ukuchaneka okuphezulu, ixabiso eliphantsi, umgangatho olungileyo
● Yenza indawo yokuhlala i-axial
Egqithileyo Ezolimo Ukuthwala i-UCP Series Pillow Block Bearing
Okulandelayo: Ukuchaneka okuphezulu kwama-32000 kuthotho lweeMoto eziThutha iRoller Roller